Phupha malunga neWebhu yesigcawu | Ukucoca, kuDonga kunye neCeiling
kuqala » Amaphupha » iphupha lewebhu yesigcawu
Ngaba uyazi ukuba kuthetha ukuthini iphupha lewebhu yesigcawu?
Amaphupha zizilumkiso ezivela kwi-subconscious yethu. Xa siphupha, sivumela i-subconscious ukuba isithumelele izilumkiso kunye nemiqondiso yento ethile ebomini bethu: nokuba yimvakalelo ethile, ingcamango, i-premonition okanye umnqweno.
Ngoko ke, kuyinto eqhelekileyo ukuba abantu babe nomdla wokuqonda intsingiselo yephupha.
Izigcawu zizidalwa ezibangela uloyiko kunye nokungafuni kubantu abaninzi. Abanye bade babe ne-phobia yezigcawu. Nangona kunjalo, oku akuthinteli ukuba nokwenzeka kokuphupha kunye nezi zidalwa zincinci.
Ngoko ke, ukuba uphuphe ngendlu yesigcawu, yazi ukuba izele ziintsingiselo.
Kuthetha ukuthini ukuphupha malunga neentambo zesigcawu?
Amaphupha esigcawu ngokubanzi ubunzima e imiqobo.
Isigcawu luphawu lobufazi kunye nobunina.
inokufuzisela iingxaki ezikufutshane okanye ukuqina koloyiko e iimvakalelo zokungabi nambono, ukungakhuseleki kunye noloyiko lokungakwazi ukufikelela kwiinjongo ozinqwenela kakhulu.
Ukuba uphuphe ama-spider webs, oku kubonisa ukuba inkululeko yakho iyacindezelwa.
Isenokuba lubudlelwane bothando, umsebenzi, umlutha okanye enye into engakuniki amandla okusabela.
Ke ngoko, lixesha lokuba uzikhulule kucalucalulo lwakho ukuze ufezekise iinjongo zakho. Indlu yesigcawu ikwamele iminqweno yakho ebanjwe kuloyiko lwakho. Jongana noloyiko lwakho!
Phupha ngokucoca indlu yesigcawu
Ngaba ubucoca kakuhle iintambo zentambo endlwini yakho? Ngoko intsingiselo yeli phupha ngokuthe ngqo enxulumene nokucoca ekufuneka ukwenzile ebomini bakho.
Oku kucoca kuqhagamshelwe kubahlobo bakho. Ke kufuneka ubakhuphe abanye abantu ebomini bakho.
Ngabahlobo abenza ngathi bakukhathalele, kodwa abafuna ngokwenene ukwenzakaliswa kwakho nokungonwabi. Ngoko zama ukuyisombulula le nto ngokukhawuleza.
Phupha ngeentambo zesigcawu eludongeni
Ukuba uphuphe ngewebhu yesigcawu eludongeni okanye isigcawu sikhuphuka eludongeni, oku kuluphawu oluhle, olubonisa ukuba ubomi bukunika amathuba othandweni nakwintsimi yobuchwephesha.
Isenokuba liphupha elibi, kodwa ungothuki, uzisa iindaba ezilungileyo.
Lungiselela ukuba ukumangala okuhle kwezothando okanye ezemali kuyeza kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Phupha ngeentambo zentambo eluphahleni
Amaphupha anendlu yesigcawu phezu kwesilingi, okanye ngesigcawu sisihla okanye sinyuka sisuka eluphahleni luphawu lokuba. uyakhululeka kwimeko ethile enzima yexesha elidlulileyo.
Unamandla kunye namandla ezandleni zakho ukoyisa iimeko ezidlulileyo.
Thatha ixesha lokucamngca ngobomi bakho kunye nento ongathanda ukuyitshintsha kuyo, kodwa ngengqiqo. Eli lixesha elihle lokuba wedwa.
Thatha ithuba lokucamngca, uhambe uye kwindawo ezolileyo, uzilolonge umdlalo owuthandayo okanye wonwabele umzuzwana nawe.
Phupha malunga neentambo zesigcawu emzimbeni
Ukuba uphuphe ngewebhu yesigcawu emzimbeni wakho, okanye isigcawu emzimbeni wakho, elo phupha libonisa ukuba unengxaki. iingxaki zemali, iingxaki zolwalamano, okanye kwaneengxabano emsebenzini, ezi ngxaki ziza kuconjululwa kungekudala.
Iimpendulo ozijongayo kubunzima ebomini bakho ziya kufika kungekudala.
Ukuzola kuya kuza ebomini bakho, yonwabele!
Phupha ngokutshabalalisa indlu yesigcawu
Amaphupha malunga nentambo yesigcawu, oko kukuthi, iyayitshabalalisa, inokuba nentsingiselo ekhethekileyo!
Ukuba ephupheni lakho utshabalalise i-web yesigcawu, ke le yi-harbinger yoloyiso kwimiqobo yobuchwephesha kunye nabachasi emsebenzini.
Ukuba ujonge ukunyuselwa umvuzo okanye ukunyuselwa, ixesha lilungile.
Unokufumana imisebenzi emitsha kungekudala.
Isilwanyana esivalelwe kwintambo yesigcawu
Xa uphupha ukuba isilwanyana esithile sibanjwe kwintambo yesigcawu, oku kubonisa ukuba kukho umntu olindele ukuba wenze impazamo. Umntu uthetha kakubi ngawe emva kwakho kwaye uzama ukulimaza umfanekiso wakho.
Eli lixesha lokuzikhusela kwaye ulumkele into oyithethayo ngobomi bakho bobuqu kwabanye. Ke ulwazi oluncinci malunga nobomi bakho bobuqu abanye bayazi, kokukhona ungcono.
Olu hlobo lwephupha lukwabonisa ukungcatshwa, enokuthi ivela kubahlobo, abantu osebenza nabo okanye ubudlelwane.
Isilwanyana esibanjwe kwindlu yesigcawu simele umgibe omkhulu. Umntu uya kukungcatsha kunye nentembelo yakho. Nika ingqalelo kwisimo sengqondo sabantu abakungqongileyo.
Tshabalalisa indlu yesigcawu
Ukuphupha ngeentambo zesigcawu, oko kukuthi, umntu utshabalalisa enye, kunokuba nentsingiselo entle.
Ukuba ephupheni lakho utshabalalise i-web yesigcawu, oku kubonisa amandla onawo ekufumaneni indlela yokuma kwaye ube ngaphezu kweentshaba zakho kunye nabachasayo.
Nokuba bunjani ubunzima, uhlala ukwazi ukoyisa imiqobo ebomini bakho.
Kwimeko yeli phupha, limalunga nomsebenzi wakho kunye nobomi bomsebenzi wakho. Iwebhu yesigcawu imele imigibe kunye namaqhinga athe iintshaba ozifumene kwindawo yokusebenza zimiselwe ukuzama ukukwenzakalisa.
Kuqheleke kakhulu ukufumana abantu abanomona abazama ukwenza imigibe kubantu osebenza nabo, njengoko ishishini kunye nehlabathi lobuchwephesha linokhuphiswano olugqithisileyo.
Nangona kunjalo, iphupha lakho libonisa ukuba kungakhathaliseki ukuba yintoni umgibe abazama ukuwenza ngokuchasene nawe, ekugqibeleni, uhlala uphumelela.
Banjiswa kwiwebhu yesigcawu
Ukuphupha ukuba ubanjwe kwiwebhu yesigcawu kubonisa ukuba baninzi abantu abakhohlakeleyo ebomini bakho namhlanje. Aba bantu bazama ngazo zonke iindleko ukukwenzakalisa nokukurhintyela.
Eli phupha lisebenza njengesilumkiso esikhulu sokuba ubeke ingqalelo kuye wonke umntu okufutshane nawe.
Isilumkiso seli phupha sibaluleke kakhulu kwaye kufuneka sithathelwe ingqalelo ngakumbi kwinkalo yoshishino. Ukuba unamaqabane, kufuneka uwakhathalele kwezi veki zimbalwa zizayo.
Ukuba unendima yobunkokeli, balumkele abasebenzi bakho. Kwaye yilumkele into oyithethayo kubasebenzi osebenza nabo. Jonga izimo zengqondo zabantu abakungqongileyo. Iimpawu ezincinci zezona zinentsingiselo enkulu.
Lumka ungagqithiswa ngokuqhathwa ngabo ubathemba kakhulu.
Eli lixesha lokuzikhusela kwaye uphephe ukwabelana ngeenkcukacha ngobomi bakho nabantu kwindawo osebenza kuyo.
Intsingiselo kuMdlalo weZilwanyana
Njengoko usazi, sihlalutya amaphupha amaninzi anxulumene nethamsanqa kumdlalo wezilwanyana.
Iiwebhu zesigcawu azifani, kwaye ngethamsanqa, zizikhombisi ezibalaseleyo zethamsanqa. Oku sikuthetha ngenxa yokuba kukwakhiwa kwento ezinzileyo nekhuselekileyo.
Ke ngoko, sishiya uqikelelo olufunayo kwangoko:
Ukongeza, ungasebenzisa la manani alandelayo ethamsanqa: 13, 19, 25, 41, 48
Yazi intsingiselo ukuphupha ukungcatshwa
Intoni kuthetha ukuphupha ngengxowa
Ukutolikwa okuhlukeneyo kokuphupha malunga nesele
Ke, kufuneka ukuba sele ubonile ukuba ukuphupha ngewebhu yesigcawu kunokuba neentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo.
Ngoku kukuwe ukuba uhlalutye iphupha lakho kunye nazo zonke iinkcukacha zalo ukuze uqinisekise ngokuqinisekileyo ukuba lizama ukudlulisela ntoni kuwe.
Ungaze ulibale ukuba unokuhlala usebenzisa icandelo lamagqabantshintshi ukuba usixelele ngephupha lakho, ngoko sinokuzama ukucacisa onke amathandabuzo akho ngalo!
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha malunga neentambo zesigcawu?
1.1 Phupha ngokucoca indlu yesigcawu
1.2 Phupha ngeentambo zesigcawu eludongeni
1.3 Phupha ngeentambo zentambo eluphahleni
1.4 Phupha malunga neentambo zesigcawu emzimbeni
1.5 Phupha ngokutshabalalisa indlu yesigcawu
1.6 Isilwanyana esivalelwe kwintambo yesigcawu
1.7 Tshabalalisa indlu yesigcawu
1.8 Banjiswa kwiwebhu yesigcawu
1.9 Intsingiselo kuMdlalo weZilwanyana
NgoJanuwari 8, 2019, 1: 16 pm
Ndiphuphe ndiphakathi kwesithuba esivalekile nesimnyama, ndichukumise intloko yam kwiintambo zesigcawu nezigcawu, ndaphuma ndazisusa ndazijula ​​kude ndade ndayisusa yonke intloko yam.
NgoFebruwari 3, 2019, 9: 53 am
Ndiphuphe ndihamba uhambo kwaye xa ndibuya endlini yam kugcwele iintambo zesigcawu kwaye xa ndibona yonke loo nto ndathatha ityhefu ndaqalisa ukuyihlikihla.......ndavuka.